Mingwang Bvunzo Zvekushandisa - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co, Ltd.
Kambani yedu ine ese marudzi ehunyanzvi ekuyedza michina
Inonyungudika kuyerera Index inoyera kuti mangani magiramu epolymeri ari kuyerera nepadenga, kushandiswa kwayo kunowanzo muindasitiri yepurasitiki. melt flow indexer ndiyo inonyanya kufarirwa mudziyo mupurasitiki indasitiri kuona zvinhu viscosities uye inowanzo shandiswa kuyedza batch-to-batch kuenderana.
Carbon nhema (graphite) ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa epurasitiki zvinowedzera kwete chete nekuti iri yakachipa sosi yevatema pigment asiwo nekuti inopa yakanakisa michina zvivakwa uye kuramba kune oxidation-yekunze. Naizvozvo, kuyera huwandu hwekabhoni dema zvemukati zvakakosha kuitira kuti uchengetedze kudzora kwepurasitiki zvivakwa.
ASTM D1603 uye ISO 6964 iripo nzira dzakajairika dzekuongorora iyo kabhoni nhema zvirimo muolefin uye PE pombi zvigadzirwa, zvichiteerana.
Kunyanya chaizvo, bvunzo nzira dzinotsanangura kutsanangurwa kweakabhoni nhema yezvinhu mu polyethylene, polypropylene, uye polybutylene plastiki. Chishandiso chakashandiswa ipombi yevira ine chikepe chinopisa chakaiswa mukati.
Pakutanga, izvo zvinhu zvinopisa pa550 °C kupisa iyo polymer iyo uremu hwayo hwakanyorwa pamberi uye mushure mekuita uku. Pakupedzisira, masara anopisa pa 900 °C kudzamara kabhoni nhema zvinhu zvatsva, zvino yobva yatonhora uye kuyerwa.
Iyo Dripper Inoyerera Tester inogona kuyedza chero mhando yeanoburitsa chishandiso kubva kuchidonhedza tubing uye kudonhedza tepi kune-pamutsetse bhatani madripsi, mafafita uye kunyange emukati madrippa asina pombi.
Kushandisa masero emutoro kuyera mvura yakaunganidzwa inobvumidza yakanyanya kukwirisa kuyerwa kuyerwa munguva ipfupi inogoneka. Isu tinozvizadzisa izvi nekubvumira anosvika gumi sampuli kuti aedzwe panguva imwe chete kumwe kumanikidza.
Inoyerera Tester iri ISO 9260 uye ISO 9261 inoenderana. Maedzo ekuyera akaenzana kubva ku12-25 uye mamwe anowanikwa pakukumbira. Kuyedza kunogadziridzwa zvizere kusvika pamakumi matatu emhando dzakasiyana dzebvunzo nguva. Chiyero chega chega chinoburitsa mushumo unosanganisira mairafu uye ongororo yehuwandu seyakawedzera uye CV.
CV & CU kukosha Kuedzwa
YeMamiriro ekunze Resistance Bvunzo
Dhonza Kunze Kuramba